"शंकरका नजरमा विश्वेश्वर" - शंकर लामिछाने (२०७१ साउन ३, कान्तिपुर (कोसेली))
हाम्रो प्रथम परिचयको दिन जीवनमा कहिल्यै नबिर्सने गरी महत्वपूर्ण छ । त्यो हो ३० जनवरी १९४८ को दिन –महात्मा गान्धीको हत्याकाण्ड भएको दिन । म र मेरा एकजना साथी सागरदत्त कोइराला काशीबाट पटना जान हिँडेका थियौ । हामी दुवैको निम्ति पटना एकदम नौलो थियो । विश्वेशवरजीको नाउँको एक दुई परिचयपत्रको भरमा हामीले दुई बजेको ट्रेनको झ्यालबाट धानको खेतीतिर हेर्दै विश्वेश्वरको रुपरेखा एवं स्वभावको हामीले जुन कल्पना गरेर समय बिताउने प्रयत्न गरेका थियोँ त्यो सब त पटना जक्सनमा प्लेटफर्ममा ओर्लनासाथ हावा भयो ।
हामी ट्रेनमा छँदै बापूको मृत्युको समाचार प्रसारित भयो र हामीले आफूलाई नयाँ ठाउँको स्टेसनमा कूली, टाँगा, मोटर, रिक्सा, पसल, गाइड प्रत्येक वस्तुरहित निराधार एवं निस्साहा पायौँ । वरिपरिको हरेक मानिसको मनमा दंगा फसादको सम्भावना थियो –कारण त्यस बेलासम्म हत्यारो हिन्दू हो वामुसलमान त्या जानिएको थिएन । जुन मुसिबतमा एउटाले ट्रन्क र अर्कोले गुन्टा बोकेर पटनाको राजपथमा कोजीनूक, व्याङरोड खोज्यौँ होला –त्यसको कल्पना गर्दा आज पनि रौँ ठाडो हुन्छ । कोही कसैसँग बोल्न नचाहने –मानिस– मानिसबीचमा एउटा अदुश्य भय, आशांका र अविश्वास थियो – सायद त्यस पिचरोडमा टिलपिल गर्ने सडकको बत्तीबाहेक सबैतिर अन्धकार थियो । वातावरणमै मात्र थियो ।
विश्वेश्वरजीको बारेमा हामीले बनाएको कल्पना र उत्साह सब पखालिए – परिश्रमको पसिना र डरको धड्कनमा कोजीनूकमा मृत्युको शान्ति थियोँ । हामी पुग्यौँ । नोकरको हात सामान कोठामा पु¥याउन लगाएर हामी सँगैको बंगलामा वकिल साहेब खोज्न पस्यौँ । कुनै अर्कै वकिल परिवार रहेछन् । आँखाभरि आँसु सबैका, झोक्रिएका र जिज्ञासारहित । हामीलाई हेरे पनि कसैले, को किन, कहाँ ? सोधेन । मानौँ हामी त्यस बैठकमा पस्नु अर्थरहित थियो । यस्तो भान भो मानौ त्यस रेडियोबाहेक कअरु सबै चिज निष्प्राण एवं निर्जीव छन् । नेहरु बोल्न थाले.... द लाइट ह्रयाजव गन एन्ड फाइन्ड कार्कनेस एभ्रिह्वेयर । त्यसै बेलातिर ढोकामा उभिन आयो, एउटा यस्तो मानिस जसको निम्ति हामीले १७१ माइलको यात्रा गरेका थियौँ । कसलाई थाहा थियो, हामी दूईजनाको निम्ति यस क्षण नेहरुको उल्टो भावना मनमा उदायो द लाइट ह्याज कम एन्ड फाइन्ड डार्कनेस नाउह्वेयर । हामीहरुको निम्ति त्यस बेला विश्वेश्वरजी नै त्यस घडीको आशा–बिन्दु हुनुहुन्थ्यो । त्यस दिन एकै घरमा बसे पनि हाम्रो राम्रो बोलचाल भएन । भेट भयो र उहाँले भन्नुभयो, 'अब आज के कुरा गर्ने ? भोलि कुरा गरौँला ।'
दुब्लो, अग्लो, गोरो, साँच्चि भनुँ भने प्रथम परिचयमा उनको कुनै यस्तो व्यक्तित्व झल्केन कि हामी प्रभावमा परौँ । उनमा मैले एउटा खास कुराको अनुभव गरेको छु कि दुःख, आपत अथवा कष्टमा विश्वेश्वरजी आफ्नो अनुहारमा यस्तो एउटा आवरण हालिदिनुहुन्छ कि वास्तविकता बेपत्ता हुन्छ । मेकानिकल मुस्कान तथा लापरबाहीलाई जसले नजिकबाट अध्ययन गरेको छैन, त्यसले सोच्दछ कि उनी कठोर र क्रूर छन् । तर फेरि जसले उनलाई दंग पारेर खुला दिलले हाँसेको देखेको छन् उनी जान्दछन् कि विश्वेश्वरमा बाल –चपता झैँ एउटा नरमिलो कुना पनि छ । आफूलाई खोलेर हाँस्दा उनी दुवे हात अगाडि लगेर टक्क पल्टाएर, तस्बिरमा अथवा झ्यालबाहिर हेरिरहन्छन् –हाँसुन्जेल । हाँस्न सकेर फेरि श्रोताको मुखमा उनको नजर फिर्दछ ।
यसरी हाम्रो परिचय भयो । दुई दिन साथ बस्यौँ । तस्रो दिन साथै काशी फक्यौँ । रेलको डिब्बामा हामीले त्यसबेलाको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा निकै कुरा ग¥यौँ । मलाई थाहा थिउन कि विश्वेश्वरजीलाई जोसमा ल्याउन हुँदो रहेनछ र सकेसम्म छोटकरी कुरा गर्नुपर्दो रहेछ । यसैबीचमा एकचोटि ठूलो–ठूलो स्वरमा हामी बहस गर्दै थियौँ । अकस्मात उहाँको घाँटी ख्याप्प बस्यो । साथको ह्यान्डबेगबाट गोली र थर्मसबाट एक गिलास पानी लिएर उहाँले त्यो औषधि खानुभयो । अनि मेरो अनुहारमा फैलिएको आश्चर्यलाई साहर्दै उहाँले भन्नुभयो । 'यो क्यान्सर आजकल फेरि बढेको छ । डाक्टरले धेरै नबोल्नु भनेको थियो । माफ गर्नोस् है !' त्यही वर्ष जब केही महिनापछि नै मलाई आफ्ना एकजना आत्मीयलाई लिएर बम्बईमा क्यान्सरको औषधि गर्न जानुप¥यो र मैले टाटा मेमोरियल हस्पिटलमा क्यान्सरपीडित रोगीहरु देखे, मेरो माया उनीप्रति झन् बढ्यो । पछि, क्यान्सरबाट मेरै पिताको जब दुःखद मृत्यु भयो मेरो उनीप्रतिको माया कहिले पनि नटुट्ने गरी स्नेहमा परिणत भयो ।
त्यसपिछ समयले हामीलाई कहिले न्यादै नजिक ल्यायो कहिले टढा हुतयाइदियो । हुन सक्दछ विश्वेश्वरजीको आँखाले मलाई कलेजको विद्यार्थीबाट सरकारी नोकर अनि पछि एउटा लेखक भइटोपलदा आश्चर्य मान्यो होला । मैले पनि आश्चर्यसाथ उनीमा धेरै परिवर्तन देखेँ । म जसरी राजनीतिबाट किनार लागेँ त्यसरी नै उनी राजनीतिमा हेलिए ।..
... हिजो चाहिँ भेट्न गएँ । यही लेखको सिलसिलामा । राजनीतिज्ञ विश्वेश्वरलाई होइन, कथाकार विश्वेश्वरलाई अलि राम्ररी चिन्नुपरेको थियो ।
मेरो पहिलो प्रश्न थियो, 'तपाईको साहित्यिक जीवन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?' जवाफ दिनुभयो,'सन् २९ देखि ।' मैले मनमनै गने, 'मेरो दुई वर्षको उमेरदेखि । चौबीस वर्ष भएछ ।' चौबीस वर्षको यो लामो अवधिमा तपाईका कथाका रुप एवं शैली देखेर नेपाली साहित्यमा तपाईले निकै नै दान पो निदुपर्ने । खै, उस्तो केही देखिँदैन ।'
'मैले त पहिलो हिन्दीमा लेखें । नेपालीमा धेरै पछि लेख्न थालें ।' मैले सोधं, 'मूल प्रेरणा तपाईले कसका लेखनीबाट पाउनुभयो ? कृपया हिन्दी, अंग्रजी र नेपाली तीनै दिशातिर प्रकाश डाल्नुहोस् ।'
'अंग्रेजीमा त भिक्टर ह्युगोका उपन्यासबाट । पहिलो–पहिलो म उनका किताबहरु अति चाख मानेर पढ्दथेँ । हिन्दीमा भने प्रेमचन्दजीबाट तपाईलाई सायद थाहा छैन होला प्रेमचन्दसँग मेरो व्यक्तिगत परिचय थियो । उनकै भनाइमा मैले आफ्नो जीवनमा सर्वप्रथम कथा लेख्न थालें , प्रेमचन्दजी तिनताक 'हंस' का सम्पादक हुनुहुन्थ्यो । मेरो प्राथमिक कथाहरु 'हंस' मा नै छापिएका थिए । सायद तिनको नाम .... घोसला, पथिक इत्यादि थिए । नेपालीमा भने सन् १९३६ तिर श्री सूर्यविक्रमजीको सल्लाहबाट लेख्न थालेँ । त्यस बेला नेपालीको मेरो प्रथम कथा 'इचन्द्रवदन' छापियो ।'
मैले अर्को प्रश्न गरें, 'अँ ! राजनीतिक जीवनले तपाईको साहित्यिक जीवनलाई मारेन ? हुन सक्थ्यो कि विश्वेश्वर राजनीतिक नेताभन्दा बढी लेखकका नाउँमा नेपालको गगनमा चम्कन सक्थे !'
'हुनसक्छ, आफ्नो विचार हो ।' मैले सोधेँ, 'तपाईका कथामा जुन मनोवैज्ञानिक भावनाले प्राधान्य पाएका छन्, त्यसलाई केही मानिस फ्रायडको असर भनी ठान्दछन्, 'कसो ?' र, मैले दृष्टान्तको रुपमा भने,ँ 'प्रगति' मा छापिएको देवेन्द्रराजको 'विश्वेश्वरको कथामा नारीको वासना प्रधान रुप' ।
एउटा मीठो मुस्कान आफ्नो अनुहारमा छरेर उहाँले मतिर हेर्नु भयो । अनि थाहा छैन मेरो मुखमा के देख्नुभयो उहाँ दंग परेर हाँस्नुभयो । दंग परेर हाँस्दा उहाँ के गर्नुहुन्छ मैले माथि बयान गरिसकेको छु ।
अनि भन्न थाल्नुभयो, 'मेरो कथाबाट अरुले जे माने लगाउन्, त्यो त उनीहरुको आफ्नो दृष्टिकोण हो, तर मैले जैले पनि आफ्नो कथाबाट सामाजिक कुनै एक विन्दुलाई लिएर त्यसमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न चाहेको छु । तपाईले मेरो कथा 'सखी' पढ्नुभयो ?' मैले भनेँ, 'पढ्न त पढेँ तर तपाईको विशेष दृष्टिकोण सुनुँ !'
'सखी कथामा एक सुखी नवयुवक दम्पतीको चित्रण गरेको छु । उनीहरुलार्य केही कुराको कमी छैन । जीवनक्रम स्थापित भइसकेको छ, त्यसमा कुनै हलचल, कुनै बाहिरी शक्तिको प्रवेश छैन । त्यस्तैमा एउटा मित्रले त्यस शान्त वातावरणमा प्रवेश गरेर त्यहाँ खलबली ल्याइदिन्छ , गृहस्थीको हृदयको वेग अर्कैतिर आलोडित हुन्छ । पाहुना चाँडै जान्छ तर अफूपछि एउटा खलबल र हलचल छाडेर ! यस कथाबाट मैले देखाउन चाहेको छु कि आत्मशान्ति तथा तृप्तिको निम्ति बीचबीचमा एउटा क्रान्ति भइरहनु आवश्यक छ ।'
मैले बीचमा कुरा काटेर भनें, 'पख्नोस्, मैले यस्तै किसिमको कथा अंग्रेजीमा पनि पढेको छु । तपार्यले मोपासाँको .. कथा पढ्नुभएको छ ?' 'भन्नोस् ! उहाँले भन्नुभयो ।
'धेरै वर्षअगाडि पढेको मोपासाँको त्यस कथासार सायद यस प्रकार छ –'एउटा प्रेम–विवाह गरेर अधवैसे भइसकेका दम्पतीले एकदिन थाहा पाउँछन् कि उनीहरुको जीवनमा एक किसिमको शिथिलता, एउटा जडता आएको छ । पैसा भएकाले दुःख समेतको अनुभव तथा सुखको चाहना रहेन । उमेरमा जुन जोस थियो, उनीहरुको प्रेममा, एउटा रोमान्टिक वातावरण तथा एउटा अपराध गर्न लाग्दाको भय, त्यो पनि छैन । उनीहरु छलफल गरेर यो निर्णयमा पुग्दछन् कि अब आफ्नो प्रेममा, एउटा रोमान्टिक वातावरण तथा एउटा छलफल गरेर यो निर्णयमा पुग्दछन् कि अब आफ्नो प्रेमलाई स्मफुरित गर्न बाहिरी शक्तिको मद्दत लिनुप¥यो । उनीहरु होटेलको व्येराले त्यस स्त्रीलाई सोसाइटी गर्ल ठानेर रक्सी तथा खाना ल्याउँदा विचित्र किसिमले अनुहारमा हेरी मुस्काइदिन्छ उनीहरुको हृदयमा एउटा धड्कन बढ्दछ । वातावरण नै रोमान्टिक भएर अउँछ र उनीहरु आफ्नो जीवनको पन्ध्र वर्षअगाडिको त्यस क्षणलाई समझन्छन् जब तिनीहरुको विवाह भएको थिएन तथा उनीहरु यसरी नै होटेलका कोठामा रात बिताउँथे । यस नयाँ रिस्थितिमा उनीहरुलाई आत्मशान्ति तथा तृप्ति हुन्छ ।'
'तपाईको कथाझै । 'उहाँले बीचमै भन्नुभयो, 'हुनसक्छ ! हाम्रो यस विचारले सामन्य झल्कनु असम्भव होइन । मेरो विचार छ एउटा खलबली भइरहनुपर्दछ कि त्यसले एउटा प्रगति ल्याओस् । जस्तै... एउटा साधारण उपमा लिउँ । सानो विरुवा रोप्नेबित्तिकै कम खत्तम हुँदैन । त्यसलाई सपार्न बीच–बीचमा गोड्न पनि पर्दछ । नत्र जुन मलिलो माटोमा त्यो रोपिएको छ त्यो समयको थिचाइमा परेर जम्दै जान्छ ।' अकस्मात् मैले एउटा चिनियाँ पत्रिकामा विश्वेश्वरको बारेमा लेखिएको एक लाइन झलक्क सम्झेँ । त्यस लेखमा एउटा पत्रकारले दुई दाजु–भाइको विश्लेषण यस प्रकार गरेको थियो – 'द डिफरेन्स बिटविन बीपी एन्ड एमपीइज सिमप्ली दिस, ह्वाइल द फोर्मेन्ट इज रिभोलुसनिस्ट द लेटर इज इभोलुसनरी रिभोलुसनिस्ट ।' कुरा पल्टाउँदै मैले सोध, तर चौबीस वर्षमा बाह्रबटा कथाले त्यो गोडाइ त पूर्ण हुँदैन ?' विश्वेश्वरजी हाँस्नुभयो, 'के गरुँ हेर्नुस् न, यो राजनीतिक जीवनले गर्दा अचेल म लेख्न पाउदिनँ । यहाँको राजनीति अलि सम्भालियोस् अनि म फेरि कथा लेख्न थाल्नेछु ।
तपाई अब त नेपालीमा नै लेख्नुहोला ?' मैले जिज्ञासासाथ सोधेँ । 'भन्न सक्दिनँ त्यो भविष्यको कुरा अँ, तर्पालाई एउटा कुरा भनिदिहालु मेरो वातावरण छैन या वातावरण उपयुक्त म छैन, तर एउटा कुरा मैलेनिकै नै अनुभव गरेको छु कि म अफूलाई नै समाजको एउटा विचित्र परिस्थितिमा नमल्दै गरी जोडिएको पाइरहेछु । काठमाण्डु अथवा नेपालको समाजमा बस्दा मलाई भारतीय समाज र संस्कृति आफ्नो हो जस्तो लाग्छ । यस्तो भान हुन्छ कि म हिन्दुस्थानमा हुर्के, बढेँ, उहीँकै वातावरण मेरा लािग उपयुुक्त छ । अनि जब म भारतमा हुन्छु मलाई लाग्छ यसमा नौलो देशमा म किन आएँ । यहाँको संस्कृति तथा समाजभन्दा म त निकै भिन्न छु । अनि मलार्य नेपालको याद आउछ ! त्यस्तै छ मेरो भाषा, हिन्दीमा लेख्न बस्दा नेपाली शब्दहरु मगजमा जोरसँग घुम्न थाल्दछन्, अनि मेरो लेखन शिथिलिन्छ, अनि जब म नेपालीमा लेख्न थाल्छु हिन्दीका शब्दहरुले मलाई ज्यादै सताउँछन् ।त्यसैले हुन सक्तछ त्यस शिथिलतालाई मार्न म त्यस बेला जुन भाष मगजमा आउँछ त्यसैलाई माध्यम मान्न सकुँ । अहिले म कसरी भनुँ नेपालीमै लेखुँला अथवा हिन्दीमा !'
मैले सोधेँ, 'तपाईको यो अनौठो परिस्थिति, (माफ गर्नुहोस् यसको उपयुक्त शब्द मैले पाइनँ, यसलाई कमजोरी भनौ) यो कमजोरीको मूल कारण हुनसक्छ भन्न सकनुहुन्छ ?'
'कमजोरी भन्ने र ? खैर...' उहाँ शब्द खोज्न लाग्नु भो क्यार ।
अकस्मात् मेरो मनमा फ्रायडको एक पक्ति बिजुलीझै चम्क्यो – 'आवर सिभिलाइजेसन इज, जेनेरल्ली स्पिकिङ, फाउन्डेड अन द सपरेसन अफ इनिस्टक्ट्स ।' पंक्तिको उदाहरणसाथ मैले भने, 'तपाईले फ्रायडका कृतिहरु पढ्नुभएको छ ?' 'अलि अलि ।'
अनि उहाँलाई केही सोध्ने मौका दिनुअगाडि मैले आफैले प्रश्न गरेँ– 'फ्रायडको विचारधारा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?'
तुरुन्त जवाफ पाएँ, 'मलाई त राम्रो लाग्छ ।' । मैले आफ्नो विचार उहाँको अगाडि राख्दै भनेँ, अरु सब त ठीक हो, तर फ्रायडले जुन यौनवृत्तिलाई ज्यादै महत्व दिएको छ त्यो मलाई चित्त बुझेन । उसको भनाइमा दूधे–बच्चाले आमाको स्तनसँग आफ्नो वासनाको तृप्ति गर्दछ । आफ्नो यौन–चेतनालाई मार्ने उसको एक मा उपाय नै उसलाई त्यस बेला त्यही स्तन मात्र उपलब्ध छ ! यो कुरा मलाई चित्त बुझ्दैन ।'
'किन ?' 'मेरो रायमा, त्यस उमेरको बालकमा सेक्स अर्गान विकसित भइसकेको हुँदैन । अनि अविकसित अंगमा तृप्तिको अनुभव कसरी आउँछ ? हामीले विचार ग¥यौ भने मनुष्यका शरीरमा यस्ता धेरै क्रिया छन् जो पहिले हुँदै हुँदैनन् तर उमेर बढ्नासाथ विकसित भएर आउँछन् –जस्तै जुंगा दाह्री !'
हुनसक्छ, डाक्टरी दृष्टिबाट तपाई कुनै हदसम्म ठीक हुनुहोस् । तर एउटा कुरा नभूलनोस्, फ्रायडले जब सम्पूर्ण मनोविज्ञानलाई वासनामा केन्द्रीभूत गरेर त्यसैको माध्यमबाट आफ्नो कलम चलाए उनले आफ्नो कुरा प्रमाणित गर्न बालकको त्यस युक्तिलाई पनि छोड्न सकेनन् । उनको दृष्टिकोणबाट उनको कुरा एकदम सत्य छ ।'
म यसको खण्डमा केही बोलन चाहिररहेको थिएँ, उहाले बीचमै मेरो कुरा पन्छाएर भनिहाल्नु भो, 'मेरो कुरा नै सुन्नोस् न ! कार्ल माक्र्सले जसरी संसारका प्रत्येक बस्तु र क्रियालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट लेखेर उनी आफ्ना भनाइका ढ्रगले सत्य छन्, उसैगरी नै फ्रायडले संसारका प्रत्येक बस्तु र क्रियालाई वासनायुक्त दृष्टिकोण दिए । तपाईले अहिले जुन टाई बाध्नु भएको छ यसैलाई लिउा । फायडको दृष्टिकोणबाट तपाईले आफ्नो सेक्स प्लिजरको निम्ति लाउनुभयो । तपाई चाहनुहुन्थ्यो कि अरु तपाईतिर आकर्षित हुन र उनीहरुको आकर्षणबाट तपाईलाई आनन्द मिलोस् । तृप्तिको उपाय हो यो एउटा । अब यसैलाई चिजलाई माक्र्सको दृष्टिकोणबाट हेरौँ तपाई आफ्ना सुटलाई पुग्ने र चाहिने पेसाभन्दा बढी पैसा कमाउनुहँदो रहेछ र अनि यति दामी टाई तपाईको घाँटीमा झन्डिन सक्दोरहेछ । यसबाट यो भन्न सकिन्छ कि तपाई खान लाउन पुग्ने एउटा कुनै स्तरको आर्थिक परिस्थितको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ । दुवै आफ्ना दृष्टिकोणमा सत्य छन् । तपाई अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न । अनि म यो पनि मान्दछु कि आज या सधै तपाईले टाई बाँध्नुमा तपाईको आफ्नो भिन्न दृष्टिकोण होस् ।'
पिषयवस्तुभन्दाकति पर हामी बहकिसकेछौँ, त्यो मैले त्यस घडी चाल पाएँ जब विश्वेश्वरजीले आफ्नु व्याख्या सिध्याउनु भयो र मतिर केही बोलोस् भनेझैँ गरी हेरिरहनुभएको !
घडी हेरेँ । समय प्रायः समाप्त भइसकेको रहेछ । म हाँसिदिएँ । अनि त्यस वातावरणलाई सेलाउने मौका दिएर एकछिनपछि मैले सोधे, कुनै दिन उपन्यास लेख्ने विचार छ ?'
'अहँ ! समयको बरबादी मात्र हुन्छ –लेख्ने पढ्ने दुवै । लेखेँ भने म त लघुकथा मात्र लेखुँला ।' तपार्यलाई उपन्यास पनै पर्दैन र ? भिक्टर ह्युगो त सायद उपन्यासकार नै हुन् !' त्यस बेला म उपन्यास पढ्थे पनि !अनि तपार्यलाई मूल प्रेरणा कसले दियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा मैले नाउँ लिएको हुँ । फेरि, यो नठान्नुहोस् कि मलाई उपन्यास पटक्कै मन पर्दैन । देशको व्यापक रुपमा समय, साज र सहित्यको विश्लेषण गर्दै लेखिएको उपन्यास मलाई मन पर्दछ । जस्तैः 'द गुड अर्थ ।'
'नेपालीमा त्यस्ता उपन्यासको कमी नै छ !' मैले भने । 'कमीः छँदै पो छैनन् ।'मैले उठ्दैभने, 'अच्छा विश्वेश्वरजी तर्पाको कृति जाडै फिजियोस् भन्ने शुभकामानासाथ म अब बिदा पो हुन्छु !'
हामी दुवैले हात जोडिदियौँ ।
प्रकाशित मिति: २०७१ साउन ३, कान्तिपुर (कोसेली)